ကဲ … စဉ်းစားကြည့်ကြရအောင် .. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Think Tank » ကဲ … စဉ်းစားကြည့်ကြရအောင် ..
ကဲ … စဉ်းစားကြည့်ကြရအောင် ..
Posted by weiwei on Oct 27, 2010 in Think Tank | 20 comments
မနေ့က မြန်မာစာကိုမေးထားလို့ ဒီနေ့ သင်္ချာမေးကြည့်မယ်။ ကီလို ၄၀ ရှိတဲ့ ကျောက်တုံးတစ်တုံးရှိတယ်။ အဲဒီကျောက်တုံးကို ၄ ပိုင်းပိုင်းမယ်။ အဲဒီအပိုင်းတွေနဲ့ ချိန်ခွင်မှာ အလေးအဖြစ်သုံးမယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ခုသတိထားရမှာက အဲဒီအပိုင်းတွေကို သုံးပြီး ၁ ကီလို , ၂ ကီလို , ၃ ကီလို , ၄ ကီလို ကနေ …….. ၃၈ ကီလို, ၃၉ ကီလို , ၄၀ ကီလိုအထိ ကိန်းဂဏန်းအားလုံးအတွက် ချိန်တွယ်နိုင်ရမယ်။
အဲဒီအပိုင်း ၄ ပိုင်းကို ဘယ်လို ပိုင်းဖြတ်ကြမလဲ ????
၂၊ ၃၊ ၅၊ ၃၀ ကီလို ဟုတ်ဖူးလား။ တကီလို ကျောက်ကို ချိန်ချင်ရင် ပိုင်းထားတဲ့ နှစ်ကီလိုအလေးကို ချိန်ခွင်ရဲ့ဟိုဖက်မှာ ချိန်မဲ့ ၁ကီလို ကျောက်တုံးနဲ့ ပေါင်းလိုက်၊ တဖက်မှာ ၃ ကီလို အလေးကိုထည့်။ ဒါဆို ချိန်မဲ့ ကျောက်တုံးအလေးချိန် ကိုသိပြီပေါ့။
၂၇ကီလိုကျောက်တုံးကို ချိန်ချင်ရင်လည်း ဒီလိုပဲ အဲဒီကျောက်ကို ၃ကီလိုအလေးပေါင်း၊ တဖက်မှာ ၃၀ကီလို အလေး ထည့်ချိန်၊ အခြေသိရောပေါ့။ မဝေရယ် ကျနော်က ကိုအောင်ပုလို လေသမာမဟုတ် ညဏ်သမားပါဗျ။ အရွေးမလွဲစေချင်ဘူး။
စဉ်းစားတာတော့ တော်ပါတယ် .. တကယ်ချီးကျူးပါတယ် .. ဒါပေမယ့် မမှန်သေးဘူး .. ၄ ကီလိုကို ဘယ်လိုချိန်မလဲ? .. ၆ ကီလိုလဲချိန်လို့မရဘူးလေ … မရတာတွေအများကြီးကျန်သေးနေတယ် … Hint တစ်ခုပေးမယ် … ၁ ကီလိုတစ်တုံးတော့ မဖြစ်မနေဖြတ်ရမယ် ..
အဲဂလိုတော့ လိမ်ပြီးထွက်ပြေးဖို့ မကြိုးစားပါနဲ့ ဝေဝေရယ်။ ကိုကြောင်ကြီးက ပလီစိချောက်ချက် ပြောတာမဟုတ်ရပါဘူး။
၄ကီလို ကိုချိန်ချင်ရင် အရင်ချိန်ပြီးသာ ၁ကီလိုကျောက်တုံးကို ယူသုံးပေါ့။ ခြောက်ကီလိုလည်း ဒီအတိုင်းပဲလေ။ မဝေဝေရဲ့ ပို့စ်ထဲမှာ အဲလိုမလုပ်ရလို့ မပြောထားဘူး။ နအဖလိုတော့ ထုတ်ပြီသား ဥပဒေအပေါ်မှာ စည်းကမ်းတွေ ထပ်ထုတ်မယ် မကြံနဲ့။ ကိုကြောင်ကြီးကို မမြင်ချင်ဘူးဆိုရင် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောလို့ရပါတယ်။
အရင်ချိန်ပြီးသားကျောက်တုံး ယူသုံးလို့မရဘူးလေ … တုံးပြီးသားအပိုင်းပဲ သုံးပြီးအလေးလုပ်မှာ .. ချိန်ပြီးသားပစ္စည်းပြန်ယူသုံးလို့ရတယ်လို့ မပြောထားပါဘူး ..
ပြောပြောကစောရောပေါ့ကွယ်၊ ကိုကြောင်ကြီးမှာ ဆံပင်တောင်ဖြူတော့မလို့။ ၁၊ ၃၊ ၈၊ ၂၀ မဟုတ်လား။ ကြောင်ကြီးပျော်ပါရစေကွယ်။
ပြောပြောကစောရောပေါ့ကွယ်၊ ကိုကြောင်ကြီးမှာ ဆံပင်တောင်ဖြူတော့မလို့။ ၁၊ ၃၊ ၈၊ ၂၈ မဟုတ်လား။ ကြောင်ကြီးပျော်ပါရစေကွယ်။
ကိုကြောင်ကြီး တော်တော်နီးစပ်လာပြီ … ဒါပေမယ့် အကုန်လုံးချိန်လို့မရသေးဘူး … နဲနဲလွဲနေသေးတယ် ..
ဟေ့ဟေ့…လွန်လာပြီနော်၊ ဘယ်ကျောက်တုံး ချိန်မရဘူးလည်းပြော။
၆ ကီလိုမှာ ချိန်လို့မရတော့ဘူးဖြစ်နေတယ် … ကျန်တာတွေလဲ ချိန်မရတာ အများကြီးရှိသေးတယ် ..
ဘာရယ်ဗျ နံပါတ်ခြောက် ဟုတ်စ..။ အဲဒီကျောက်တုံးကိုယူ ချိန်ခွင်ထဲကို ၃ကီလိုကျောက်နဲ့ပူးထည့်၊ တဖက်မှာ ၁ကီလိုကျောက်နဲ့ ၈ကီလိုကျောက်ကိုထည့်။ နှစ်ခုညီမယ်လေ။
စဉ်းစားခိုင်းရင် မစဉ်းစားဘဲ ပုန်းနေတဲ့ သူကမှ အမှန်ကွ.. ဟဲဟဲ…
နက်ကောင်းနေပြီလား? .. အန်တီ ဆူး ..
13 ဘယ်လိုချိန်မလဲ? …
၁၃+၂၈ကီလိုကတဖက် ၁ကီလိုကတဖက်၊ ခြားနားချက်က လေးဆယ်ကီလို၊ အဲဒီကမှ မူလအလေး ၂၈ကီလိုနုတ်ပြီး ၁ပြန်ပေါင်းလိုက်လေ။ ဟုတ်ဖူးယားရို့။
တရေးနိုးသော်အကြံပေါ်တယ့် … တရေးအိပ်လိုက်ပါအုန်း …
ဘယ်တူမှ မဖြေရင် ပုပုကိုယ်တိုင်ဖြေမယ်
ဘယ်ဘက် ကော ညာဘက်ကော နှစ်ဘက် စလုံးမှာ ဒီ ဖလိုးအတိုင်း ထည့်သွားကြည့်ပါ။
၁ . ၃ . ၉. ၂၇ လို့ပြောပါ။ အဲဒါအမှန်ပါပဲ။ မရစရာကို မရှိပါဘူး။ ကိုကြောင်ကြီး ပျော်ရွှင်ပါစေ။
၁ ကီလို = ဘယ်ဘက်မှာ ၁ ညာဘက်မှာ မရှိ
၂ ကီလို = ဘယ်ဘက်မှာ ၃ ညာဘက်မှာ ၁
၃ ကီလို = ဘယ်ဘက်မှာ ၃ ညာဘက်မှာ မရှိ
၄ ကီလို = ဘယ်ဘက်မှာ ၃ + ၁ ညာဘက်မှာ မရှိ
၅ ကီလို = ဘယ်ဘက်မှာ ၃ + ၂ ညာဘက်မှာ မရှိ
၆ ကီလို = ဘယ်ဘက်မှာ ၃ + ၂ + ၁ ညာဘက်မှာ မရှိ
၅ ကီလို = ဘယ်ဘက်မှာ ၉ ညာဘက်မှာ ၃ + ၁ ( ၃ + ၂ = ၉ – ၄)
၆ ကီလို = ဘယ်ဘက်မှာ ၉ ညာဘက်မှာ ၃ (၃ + ၂ + ၁ = ၉ – ၃ )
ကိုကြောင်ကြီး အိမ်မက်ထဲမှာ ချိန်ခွင်နဲ့အလုပ်ရှုပ်နေတုန်း သူများဝင်ဖြေသွားပြီ … အဖြေမှန်ပါတယ် …
ဝီလိုဝီလိုလား။ ကျုပ်က အားလုံး ပရိုင်းနံပါတ်တွေမှ ရမယ်ထင်လို့ သူတို့နောက် နင်းကန်လိုက်နေတာ မှာတွားပြီပေါ့။ ညီညီရန်နိုင်ဆိုသူရေ နောက်တခါဆို အလိုက်ကန်းဆိုးသိကွယ်၊ ကိုကြောင်ကြီး မိနေတဲ့ဂွင် မင်းလုပ်လို့ ပျက်ပါရောလား။